‘सूर्यलाई भोट हाल्ने मेरी बूढी पँधेरोबाट आउँदा माओवादी प्रवेश गरिसकिछन्’ – Sandes Post
‘सूर्यलाई भोट हाल्ने मेरी बूढी पँधेरोबाट आउँदा माओवादी प्रवेश गरिसकिछन्’
April 7, 2022 877
काठमाडौ । स्थानिय तहको निर्वाचनको घोषणा पछि सबै राजनीतिक दल अहिले निर्वाचनमा होमिइसकेका छन् । केही मुख्य नेताहरु पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमको दौडधुपमा लागेका छन् । केही दिन अघि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिन् । उनी एमाले प्रवेश गरेको समाचार भन्दा उनले कपिलबस्तुमा गरेको एउटा भाषण निकै चर्चित बन्यो ।
उनले आफ्नो न्वारनको नाम सुर्यकुमारी हो भन्दै भाषण गरेकी थिइन् । कलाकारहरु पनि धमाधम पार्टी प्रवेश गर्न थालेपछि यता कलाकार दीपकराज गिरी पनि राजनीतिमा कलम चलाउन थालेका छन् । उनको ब्यग्यं अहिले राजनीतिक केन्द्रित हुन थालकेो छ । यसै क्रममा पछिल्लोपटक उनले अहिले देशमा जारी पार्टी प्रवेशको लहरलाई व्यंग्य गरेका छन्।
उनले आफ्नै परिवारलाई उदाहरण बनाएर पार्टी फेर्ने र फेराउने प्रवृत्तिविरुद्ध कटाक्ष गरेका छन्। बाले कांग्रेस हुँ भन्नुहुन्थ्यो घरमा एक हुल नेता आएर एमाले बनाइदिएर गएछन्१ सूर्यलाई भोट हाल्ने मेरी बूढी पँधेरोबाट आउँदा माओवादी प्रवेश गरिसकिछन्’, गिरीले व्यंग्य गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘छोरो अहिलेसम्म घर आ’को छैन, कांग्रेस बनेर आउला भन्ने डर भो, देशको हालत।’
Prevबढ्यो सुनको भाउ,आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Nextकबिताको आमाबुवाले नै यसो भने छोरीले लाको र खाको मा धेरै नै डा’हा गर्थी….( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
ओहो!!! पल साहको फाइल पुग्यो उच्च अदालत, आखिर त्यो फाइलमा के छ?, हेर्नुहोस सम्पूर्ण भीडियो
आज (मंगलबार) ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ